, हेल्थ टिप्स
सयहोग चाहिँदामात्रै सम्पर्क यदि प्रेमिकाले अफ्ठ्यारोमा पर्दा तपाईंसँग कुनै सहयोगको अपेक्षा राखिन् भने आफूलाई भाग्यशाली सम्झनुस् । उनलाई सहयोग पनि गर्नुस् । तर, समस्याबाट पार पाईसकेपछि उनले तपाईंलाई नजरअन्दाज गर्न थालिन्, वा सहयोगको खाँचो हुँदामात्रै तपाईंलाई सम्झिन थालिन् भने सचेत हुनुस्, मुखले जे भने पनि तपाईं उनका लागि एउटा टिस्यू पेपरभन्दा बढी केही होइन । […]
यी गुण भएका युवकसँग मोहित हुन्छन् युवतीहरु
प्राय: युवकहरु युवतीलाई आकर्षित गर्न केही न केही गरिरहेकै हुन्छन् । तर, हत्पती कुनै पनि युवती उसको जालमा परिहाल्दैनन् । अझ विवाह र ट्रू रिलेशनसिपका सवालमा युवतीहरु निकै समझदार हुन्छन् । यसैक्रममा गरिएक एक अनुसन्धानले केही यस्ता तथ्यहरु पत्ता लगाएको छ, जसमा युवतीहरु छिट्टै आकर्षित हुन्छन् । शिक्षा, पेशा, रुप र पैसा त सबैले बुझेकै […]
थाहा पाउनुहोस्, आफ्नो पति वा प्रेमिको यस्ता व्यवहार मन पराउँदैनन् युवतीहरु
सम्बन्धमा एक अर्काप्रति केही असन्तुष्टिहरु पनि उत्पन्न हुन्छन् । यो कुरा युवा-युवती दुबैमा लागु हुन्छ । प्रेमिका वा पत्नीले आफ्नो प्रेमि वा पतिको मन नपराउने ५ व्यवहारहरु प्राय युवतीहरुको गुनासो गर्छन्, प्रेमिले आफ्नो कुरा सुन्दैन । सुनिहाले पनि खासै महत्व दिँदैन । आफूले केही कुराभन्दा उसले ध्यान दिएर सुनोस् भन्ने उनीहरुको अपेक्षा हुन्छ । युवतीहरुको […]
पढ्नुहोस्, मृत्युका भयानक तथ्यहरु
मृत्यु जीवनको सबैभन्दा भयानक परिघटना हो । तर सत्य के हो भने जन्मपछि मृत्यु अनिवार्य छ । आउनुस् आज हामी यही मृत्युका केही भयानक पाटोको बारेमा चर्चा गर्दैछौं । विश्वमा प्रतिवर्ष करिब ५५ मिलियन मानिसको मृत्यु हुन्छ । त्यसमध्ये ९.५ मिलियन चीनका नागरिक हुन्छन् । संसारमा सबैभन्दा बढी मानिस हर्ट अट्याकका कारण मर्छन् । सबैभन्दा […]
कतै तपाईलाई पनि कब्जियत भएको त छैन ? यस्ता छन् कब्जियतको लक्षणहरु
कब्जियतको कारणले उच्च तथा निम्न रक्तचाप, मधुमेह, मोटोपन, ग्यास्ट्र्रिक, अल्सर, आन्द्रा तथा पेटको क्यान्सर, इरिटेबल बवेल सिन्ड्राम, एसिडीटी, एपेन्डीसाइटिस, अपच, गुदद्वार खस्नु, डकार आउनु, चाया, पोतो, डन्डीफोर, आउनु, जोर्नी दुख्नु, हड्डी खिइनु, सुन्निएर विकृत हुनु जस्ता समस्या आउँछ । मानसिक समस्या जस्तैः डर, चिन्ता, खिन्नता, उदासिनता, अनिद्रा, यौनशक्तिको क्षय, प्रतिरक्षा प्रणालीको कार्यक्षमता गडबड हुनु, सर्दीले […]
स्तनलाई उचित आकारमा सजाउने तरिकाहरु
आतदले तपाईको स्तनको स्वास्थमा गम्भीर अशर गरेको हुन सक्छ । तपाईको स्तनलाई सदा स्वस्थ र ठूलो आकारमा सजाई राख्न तपाईले तलका विषयमा ध्यान दिनुपर्छ । लामो समयसम्म घोप्टो परेर नसुत्नुहोस लामो समय घोप्टो परेर सुत्दा तपाईको स्तननको आकारमा परिवर्तन हुनुका साथै स्तन टेडो हुन सक्छ । स्वास्थ्य सम्बन्धी पत्रिका इल्सइभियरमा प्रकाशित एक अध्ययन अनुसार स्तनलाई […]
छोरी सात वर्षको पुगेपछि यौनी छेड्ने प्रचलन
एजेन्सी, एउटा समुदाय जहाँ केटी मान्छेको यौनी सात वर्ष पुग्ने वित्तिकै छेडिन्छ । यो भारतको एउटा सानो बोहरा मुस्लिम समुदायको परम्परा हो । यहाँ महिलाको यौनी अभिभावकले छेडिन्छिन् । तर, भारत सरकारले यसलाई अहिले सम्म यसलाई प्रतिबन्ध लगाएको छैन् । यसकारण हजारौ महिलाहरुले यसको ज्यजदति खेपिरहेका छन् । यो कुप्रथा त्यहाँ मात्र नभई विश्वका अन्य […]
दाह्री पाल्द लाग्दैनन् यस्ता प्राणघातक रोग
अचेल युवापुस्तामा दाह्री पाल्ने फेसन नै चलेको छ । स्कूल कलेज पढ्ने टिनएजर हुन् वा अफिसमा काम गर्ने कर्मचारी नै किन नहुन्, धेरैजसो पुरुषहरुले अचेल दाह्री पालेकै देखिन्छ । कतिपयले शौखका लागि पनि दाह्री पाल्ने गरेको पाइन्छ । दाह्री पाल्नुका छुट्टै फाइदा पनि छन् जो उनीहरु स्वयंलाई थाहा नहुन पनि सक्छ । हालै गरिएको एक […]
अनारवाट हाम्रो स्वास्थ्यमा हुने फाइदाहरु
शरीरलाई फिट र स्वस्थ राख्नका लागि प्रायः सबै फलफुलहरु लाभदायक मानिन्छ । तर खासगरि अनारको जुसले तौल घटाउनमा मद्दत गर्दछ । अनारमा मुख्यतः भिटामीन ‘ए’, ‘सी’, ‘इ’ र फोलिक एसिड र एन्टी एक्सीडेन्ट पाइन्छ । जसले पेटमा रहेका अनावश्यक बोसोहरुलाई घटाउन मद्दत गर्दछ । अनार सेवन गर्नुका यी फाइदाहरु नियमित रुपमा अनारको जुस सेवन गर्नाले […]
कति यस्ता ठाउँ पनि छन्, जहाँ एक पटक हाँसेको ४० रूपैयाँ
हाँसो हरेक रोगको औषधीको रुपमा चिन्निन्छ । हासोले ब्यक्तित्वमा निखार पनि ल्याउने गर्छ । कतिपय मनिसले हासोले नै कस्को स्वभाव कस्तो छ भनेर थाहा पाउने गर्छन् । तर कती यस्ता ठाउँ पनी छन । जहाँ हासेको पनि पैसा तिर्नु पर्छ । हाँसेको पनि पैसा ? तपाईं अचम्म पर्नुभयो होला हैन ? पैसा तिर्नबाट जोगिन तपाईंले […]
शरीरका यी अंगहरुमा परफ्युमको प्रयोग नगर्नुहोस्,
घर बाहिर निस्कनुअघि हामी सबै परफ्युमको प्रयोग गर्छौ । शरीर तथा कपडाबाट आउने दुर्गन्ध कम गर्न अथवा बास्नादार बन्न अनि व्यक्तित्वलाई निखारता प्रदान गर्न परफ्युमको प्रयोग गरिन्छ । प्रायः हामी परफ्युमको प्रयोग नाडी, कान, गला जस्ता शरीरका अंगमा गर्छौ । किनकी यी अंंगहरुमा लगाएको परफ्युम धेरैबेर टिकाउ हुने र बास्ना पनि आउने हुन्छ । तर, […]
यस्ता गलत बानीले तपाईको दिमाग कमजोर हुन्छ
उमेर वृद्धिसँगै स्मरण शक्तिमा ह्रास आउनुलाई सामान्य रुपमा लिन सकिन्छ तर युवा अवस्थामा नै यदि कुनै व्यक्तिको स्मरण शक्तिमा कमि आउँदै गएको छ भने त्यसको पछाडि कुनै गम्भीर कारण हुनसक्ने डाक्टरहरु बताउँछन् । यस्तो समस्या दिनप्रतिदिन बढ्दै जाने र अन्तमा दिमागमा खतरनाक समस्या पैदा हुने विभिन्न अनुसन्धानमा देखाइएको छ । मानिसका केही यस्ता बानी छन् […]
यदि घोप्टो परेर सुत्नुहुन्छ भने आजैदेखि छोड्नुहोस्
तपाइँ जिउलाई कस्तो पारेर सुत्नुहुन्छ ? कोल्टे, उत्तानो वा घोप्टो ? यदि घोप्टो परेर सुत्नुहुन्छ भने अबदेखि त्यसरी सुत्न छाड्नुहोस् । पछिल्लो अनुसन्धानले घोप्टो परेर पेटमा दबाब पर्नेगरि सुत्दा आकस्मिक मृत्युको खतरा उच्च हुने चेतावनी दिएको छ । समान्य ब्यक्तिलाई समेत यसले नकारात्मक असर पार्ने र सुत्दा छारे रोग भएका ब्यक्ति पुरै मृत्युको जोखिममा हुने […]
मांशाहारीले यी कुरामा ध्यान दिनु आवश्यक
जवान मान्छेले एक दिनमा २५० ग्राम सम्म मासु खान राम्रो हुन्छ । मान्छेको एक किलोग्राम तौलका लागि एक ग्राम प्रोटिन आवश्यक हुन्छ । दुई सय ५० ग्राम खसीको मासुमा सरदर ५० देखी ५५ ग्राम प्रोटिन हुन्छ । थप प्रोटिन अन्य खानाबाट पाइन्छ । मधुमेह, उच्चरक्तचाप, मृगौलामा समस्या, कोलेस्ट्रेरोल बढी भएका व्यक्तिले बोसो नभएका मासु सकभर […]
वर्षा याममा स्वस्थ रहने पाँच उपायहरु
वर्षायाममा विभिन्न सरुवा रोगले मान्छेलाई प्रायः सताइ रहेको हुन्छ । त्यसकारण यी पाँच उपायहरुमा विशेष ध्यान दिनु आवश्यक छ । जुन यस प्रकार रहेको छ । • वर्षायाममा जमिन भित्र बस्ने धेरैजसो कीरा सतहमा आउने भएकोले तिनले फलफूल, साग, तरकारीलगायत खाद्य पदार्थलाई दूषित गर्छन् । त्यसकारण यस मौसममा कुनै पनि फल वा साग, तरकारी खानुअघि […]
यी ६ कुरा जसले छालाको क्यान्सरबाट बचाऊछ
क्यान्सर एउटा भयानक शब्द हो । जस्को नाम सुनेरै मानिसहरु तर्सने गर्दछन् । क्यान्सर विभिन्न प्रकारको हुन्छ । र यो विभिन्न कारणले लाग्ने गर्दछ । आज हामी तपाईलाई छालामा हुने क्यान्सर बारे जानकारी दिन्छौं । हरेक मानिसको शरीरमा आन्तरिक परिवर्तन, आश्यकता र कमीलाई पूरा गर्ने क्षमता हुन्छ । तर कहिलेकाहिं आन्तरिक प्रणाली मानिसको लागि घातक […]
यी ५ कुरा बढि खाए क्यान्सर हुन सक्छ
तारेको खानेकुरा तारेको खानेकुरा बढी खाइयो भने शरीरमा एक्रिलामाइड नामक तत्वको सञ्चय बढ्छ, जसले पुरुषमा सन्तान उत्पादन गर्ने क्षमता कम गरिदिनेदेखि क्यान्सर लगाउनेसम्मको जोखिम बढाउँछ । उसिनेको खानामा एक्रिलामाइड तत्व कम हुन्छ । त्यसैले उसिनेको परिकार लाभदायक हुन्छ । रातो मासु सुंगुर र खसीको फलमासु खान मज्जा आउँछ । तर, यस्तो रातो मासु बढी खाने […]
थाहा पाउनुहोस्, दाह्रि पाल्ने परुष महिलाको नजरमा कत्तिको आकर्षक ?
अचेल जहाँ गएपनि दाह्रि पाल्नेहरुको जमात देखिन्छ । लामो दाह्रि पालेर हिडिरहेको मान्छेमाथि जोसुकैको पनि नजर पर्छ । यस्तो मान्छेको व्यक्तित्व टाढैबाट झल्किन्छ । मान्छेले दाह्रिवालासंग हत्तपत्त झर्केर पनि बोल्न सक्दैनन् । दाह्रि पाल्ने प्रचलनको सुरुवात ईजिप्टबाट भएको मानिन्छ तर आज भोलि यसको फेसनले नेपाली युवाहरुलाई पनि आर्कषित गरेको देखिन्छ । दाह्रि पालिराख्न त्यति सजिलो […]
हाम्रो स्वास्थ्यको लागि घ्युकुमारीवाट हुने फाइदाहरु
घ्युकुमारी स्वास्थ्य र सुन्दरताका लागि निकै फाइदाजनक मानिन्छ। यसलाई अंग्रेजीमा एलोभेरा भनिन्छ र यसमा भिटामीन ए, बी, बी का साथै फोलिक एसिड, क्याल्सियम, म्याग्नेशियम र पोटासियम जस्ता तत्वहरु पाइन्छन् । केही फाइदाहरु १. यसको जुसले शरीरको अनावश्यक तौल घटाउन मद्दत गर्छ । २.मुटुका रोगहरुको सम्भावना न्यूनिकरण गर्न एलोभेरा जुस निकै लाभदायी मानिन्छ । ३.रोग प्रतिरोधात्मक […]
हुन त कम्मर दुख्ने समस्या विशेषगरी ४५–६४ उमेर समूहको मानिसमा पाइन्छ । तर बढ्दो तनाव, अनियमित दिनचर्याका कारण यस्तो समस्या हरेकमा उत्पन्न भएको छ । अचम्मको कुरा के छ भने जसलाई यो समस्या सुरु हुन्छ, धेरैजसो मानिसहरुमा १.५ देखि ३ महिनामा स्तवः ठिक हुन्छ । तर ५ प्रतिशत मानिसहरु यस्ता पनि हुन्छन् जसमा यो समस्याले […]